Musliima Hedduutti imbaasii Itiyoophiyaa DC Jiru Duratti Hiriira Bahe
Dilbata, Guraandhalaa 14, 2016 Local time: 23:54
WASHINGTON,DC— Warrii hiriira bahee kun akka jecha Sheek Khaliid Mohaammaditti nama,DC,VA,fi MD dhufee rakkoolee himachuuf dhufe.
Sheek Khaliid Imaama Majida First Hijira Foundataion WDC jiruuti mootummaan Musliimaa Itoophiyaa deebii kennuu diduutti hiriira isaan baase.
“Wantii dhufneef biyya Itoophiyaa keessatti shororkaa amantii Islaama irratti amma deemaa jirtu,Ah-Bash Islaama Itoophiyaa irratti fahuu,filmaatii majliisa keennaa masjida keennatti ha nuu godhamuu fi madrasaan Hawaliyaa akkuma duraa ummataa haa deebitu ka jedhu himachuuf.”
Akka Sheek Khaliiditti Koreen adoo rakkoo Musliimaatii fala barbaadanuu hidhamanileen hiikaman gaafachuu dabalee waan hedduutti gaafatame.
Jarii hiriira bahe kun akka jecha Sheek kanaatti waan baheef kanallee bareeffamaan himachuuf mootummaa Itoophiyaalleetti xalayaa kennachuullee hin fedhuu hiriiruma bahee rakkoo himatee galuu fedhe.
Hiriirii Musliimaa kun Embaasii Itoophiyaa dura saatii sadii haga jahaa ture.